Streamliner Productions no lasa mpiara-miasa miafina xR voalohany any Nouvelle Zélande | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Streamliner Productions no lasa mpiara-miasa miafina xR voalohany any Nouvelle Zélande
Streamliner Productions no lasa mpiara-miasa miafina xR voalohany any Nouvelle Zélande
Hody olon-kafa mandray an'i Streamliner Productions any Nouvelle Zélande amin'ny tambajotra mpiara-miasa manerantany. Streamliner izao a miafina xR Creative & Rental Partner, ary hamela ny fahaiza-mamorona vaovao ho an'ny famokarana virtoaly ao amin'ny firenena iray izay nofaritana ho toy ny mekeka mandroso ho an'ny indostrian'ny sarimihetsika manerantany.
Ny tambajotra mpiara-miombon'antoka dia mirakitra mpiara-miasa maherin'ny 200 manokana amin'ny alàlan'ny asa aman-draharaha miafina ary ahafahan'ny mpanjifa farany manome fitaovana tsara indrindra ary koa talenta teknika sy famoronana manampy amin'ny fiainana traikefa mivantana sy virtoaly.
Streamliner dia nanambola vao haingana tao amin'ny vx4 nandresy ny disguise ary koa ny sehatra fampiantranoana rx vao navotsotra ho an'ny motera fandefasana antoko fahatelo - singa iray lehibe amin'ny vahaolana xR, namboarina ho amin'ny ho avin'ny famokarana virtoaly. Ny trano famokarana teknika koa dia nahazo fiofanana manokana momba ny fizotran'ny asa sy ny teknolojia xR hahatratrarana ny satan'ny mpiara-miasa sy ny fahazoan-dàlana, ary izy ihany koa no hany mpiara-miasa ofisialy ao amin'ny firenena izay namokatra famokarana xR farany.
Streamliner dia mitazona lova iray amin'ny fanomezana ny mpanjifa teknolojia fialamboly avo lenta sy avo indrindra, miaraka amina ekipa manam-pahaizana vaovao sy manam-pahaizana momba ny teknika handefa hetsika mivantana sy famokarana sarimihetsika manerana an'i Nouvelle Zélande.
“Ny ekipanay dia manambatra traikefa an-tsehatra amina am-polony taona maro miaraka amin'ny fahalalana lalindalina momba ny rafi-tsary avo lenta ary mahay miasa amin'ny tetik'asa avo lenta sy be pitsikera izahay”. hoy i Richard Manu, tompona Streamliner ary GM. “Manambola hatrany izahay amin'ny fitaovana farany, rindrambaiko ary rafitra manome alalana ny mpanjifanay hanana haitao mandroso indrindra. Ny fampidirana ireo vokatra manafina maro ao amin'ny dalam-piasanay dia nampifanaraka ireo rafitra ireo ary ankehitriny miaraka amin'ny fantsona xR, tsy misy azo tratrarina ”.
Hatramin'ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana ekena, ny asa vao haingana dia nahita fiaraha-miasa ofisialy ihany koa eo amin'ireo mpilalao fototra ao amin'ny indostrian'ny sarimihetsika sy ny fampielezam-peo. Mampivondrona ny fahaiza-manao sy fahalalana mivantana momba ny haitao farany xR miafina avy amin'ny Streamliner, fotodrafitrasa fanaovana sary avy amin'ny iray amin'ireo studio malaza indrindra eto amin'ny firenena, ny Avalon Studios ary ny famoronana votoaty tena izy ary ny VFX avy amin'ny herinaratra malaza eran-tany, Weta Digital.
"Ny fananganana dia misy takelaka LED lehibe sy azo alamina izay afaka mampiseho horonantsary lavitra mihoatra ny 8K ho fomba iray hampitomboana setroka azo ampiharina ary matetika manolo ny pikantsary maitso ho an'ny mombamomba sy ny any ivelany", hoy i David Conley, mpanatontosa Executive Weta Digital. Ity haitao farany ity, miaraka amin'ny tombony azo amin'ny fahasalamana sy fiarovana amin'ny fiasa any Nouvelle Zélande, izay nifehy tsara ny areti-mifindra, dia antenaina fa hanampy amin'ny famokarana ny famokarana ny habe rehetra ho an'ity fonosana vonona hampiasaina ity.
Tetikasa miavaka iray amin'ny fivoarana avy amin'ny Streamliner sy Weta Digital ny tohin'ny “Avatar” nataon'i James Cameron, izay ampiasain'ny sasany amin'ireo alàlan'ny asa miafina farany.
“Ny fametrahana ny fiaraha-miasa amin'i Streamliner dia teboka iray hisehoan'ny fiovana any amin'ny Hemisphere atsimo, ary indrindra any Nouvelle Zélande sy ny orinasan-tsarimihetsika maneran-tany. Miara-miasa amin'ny ekipa ao amin'ny Streamliner izahay, afaka manohana am-pahatokisana ireo tetikasa sy famokarana ao amin'ity faritra ity izay mitady hampiasa ny haitao xR miafina mba hanosehana ny fetra famoronana, ”hoy i Tom Rockhill, CSO miafina.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Streamliner Productions New Zealand: www.streamliner.co.nz/
disguise xR dia efa namoaka famokarana fotoana tena maharitra ho an'ireo mpanakanto mozika toa an'i Katy Perry sy ny Black Eyed Peas ,, orinasam-pandraharahana toa ny SAP, andrim-panabeazana toy ny University of Michigan, fandaharana amin'ny fahitalavitra fampielezana toa ny MTV Video Music Awards ary America's Got Talent, marika ara-barotra toa an'i Asahi sy Under Armor ary traikefa virtoaly maro any amin'ny firenena 20 mahery.
Lahatsoratra farany nataon'i Hannah Watkins (jereo rehetra)
Prasad Corp hanaingoana sary an-tsary sarimihetsika sarimihetsika sarobidy ho an'ny National Archives of Estonia - Novambra 25, 2020
Serivisy fampahalalam-baovao Visual Data hiara-miasa amin'ny renivohitra Endeavor ho an'ny dingana manaraka amin'ny fitomboana - Novambra 23, 2020
Streamliner Productions no lasa mpiara-miasa disguisexR voalohany any Nouvelle Zélande - Novambra 19, 2020
Hody olon-kafa extendedreality Productions Streamliner Virtual Production xR 2020-11-19
Previous: Blackmagic Design dia manambara maodely 3G Converter Micro vaovao
Next: Ny vondrona fahitalavitra finday dia manampy telestrator FOR-A ho an'ny famokarana fanatanjahantena mivantana